Home ၀တ္ထုတိုများ ပါရမီဖြည့်ဖက် တစ်ယောက်၏ မှတ်တမ်း
Menu	HomeGuestbookToday in HistoryNews & Blog FeedsContact Us	သံလွင်အိပ်မက် [Latest]	မျက်နှာဖုံးနှင့် အမှာစာမာတိကာစာဖတ်သူတို့ပေးစာများကဗျာများကာတွန်းများဟာသဆောင်းပါးများအက်ဆေးများဝတ္ထုတိုများပေးစာအင်တာဗျူးစာအုပ်စင်သို့ ကိုသံလွင်ဗေဒင်	သံလွင်အိပ်မက်အဟောင်းများ	အတွဲ(၄) အမှတ်(၁)အတွဲ(၃) အမှတ်(၄)အတွဲ(၃) အမှတ်(၃) (အထူးထုတ်)အတွဲ(၃) အမှတ်(၂)အတွဲ(၃) အမှတ်(၁)အတွဲ(၂) အမှတ်(၃)အတွဲ(၂) အမှတ်(၂)အတွဲ(၂) အမှတ်(၁)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၁)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၀)အတွဲ(၁) အမှတ်(၉)အတွဲ(၁) အမှတ်(၈)အတွဲ(၁) အမှတ်(၇)အတွဲ(၁) အမှတ်(၆)အတွဲ(၁) အမှတ်(၅)အတွဲ(၁) အမှတ်(၄)အတွဲ(၁) အမှတ်(၃)အတွဲ(၁) အမှတ်(၂)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁)	ယနေ့447မနေ့က1451တစ်ပတ်အတွင်း447ယခင်သတင်းပတ်က11779တစ်လအတွင်3း3416ယခင်လက72912စုစုပေါင်း2883823Visitors Counter	Join us in Facebook Facebook Fanbox 1.5.x.0	ပါရမီဖြည့်ဖက် တစ်ယောက်၏ မှတ်တမ်း	Views : 3983 Favoured : 74
ခရေဖြူ “ဟင်း” ပန်းကန်စင်ကို တရွတ်တိုက်ဆွဲယူလာအပြီးတွင် သက်ပြင်းပူပူကို မှုတ်ထုတ်လိုက်၏။ မောပန်းလွန်း၍ မ ရန် အင်အားမရှိတော့။ နေရာမချရသေး၍ ပစ္စည်းများ အားလုံး ပြန့်ကြဲနေ၏။
နေရာလွတ်တစ်ထောင့်တွင် ညောင်းညာလှပြီဖြစ်သော ခြေထောက်များကိုအနားပေးရန် ၀သောခန္ဓာကိုယ်ကို ထိန်း၍ ထိုင်လိုက်၏။ “အမေ သားတို့ လက်ဖက်ရည်သွားသောက်ဦးမယ်” ဟုပြော၍ သားနှစ်ယောက်က ထွက်သွားသည်။ သူတို့အဖေက အိမ်လိုက်ပြောင်းပေးသော သူ့သူငယ်ချင်းကို ညစာလိုက်ကျွေး၏။ ဒေါ်ချို တစ်ယောက်သာ အိမ်တွင် ကျန်ခဲ့သည်။ ညစာစားချိန်ဖြစ်သော်လည်း လေခံ၍ ရင်ပြည့်နေသည်။ လေနှင့်အတူ ပူပင်သောကများလည်း ခံနေသည်ဟု ပြောလျှင် ပိုမှန်ပေမည်။ နံရံကိုမှီ၍ မျက်လုံးကို ခဏမှိတ်ထားလိုက်သည်။ ရုတ်တရက် ခြေသံသဲ့သဲ့ကြား၍ ရင်ထိတ်သွားသေး၏။
သြော် တံခါးခေါက်သံများ၊ ခြေသံများကို ရင်ထိတ်ရသည်မှာ ၁၀စုနှစ်တစ်စုလောက်ပေကိုး။ တိတ်ဆိတ်မှုသည် ဒေါ်ချိုကို အတိတ်ပုံရိပ်များသို့ ဖြည်းညှင်းစွာ ဆွဲခေါ်သွားလေ၏။ BEd ဆင်းခါစ အထက်တန်းပြဆရာမလေး ချိုနွယ်ကိုသည် အညာသူညိုချောလေးဖြစ်၏။ ချိုချိုတဖြစ်လဲ ချိုနွယ်ကိုသည် ရန်ကုန်ကျောင်းတော်ကြီးတွင် တက္ကသိုလ်ပညာသာမက အလှပေါ်အယဉ်ဆင့်သည့် လေယူလေသိမ်း ပြောဟန်၊ ကြည့်ဟန်၊ ရယ်ဟန်၊ ပြုံးဟန် မာယာ အတော်အတန်ကိုလည်း တတ်မြောက်ခဲ့ပါ၏။ ကျောင်းပြီး၍ ပထမဆုံးတာဝန်ကျသည်က ပုသိမ်မြို့၊ အညာသူအတွက် ပင်လယ်ကမ်းခြေနှင့်နီးသော၊ မြစ်ချောင်းများပေါသော ပုသိမ်မြို့သည် တစိမ်းပြင်ပြင်ဖြစ်နေ၏။ သို့သော် ဝေးလံခေါင်သီ တောရပ်မဟုတ်၊ တိုင်းမြို့တော်ဖြစ်၍ ချိုနွယ်ကို ကံကောင်းသည်ဟု ပြောကြသည်။
ပို၍ကံကောင်းသည်ကတော့ ဧည့်ခံပွဲတစ်ခုတွင် ကိုအုန်းခင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်းပင်။ ချိုနွယ်ကိုထက် ရှစ်နှစ်ကျော်ကြီးသော ကိုအုန်းခင်သည် ပုလဲနှင့် ငါးလုပ်ငန်းဌာနမှ ဧရာဝတီတိုင်း၏ တိုင်းဦးစီးမှူးပေါက်စ။ အသက်သုံးဆယ်ကျော်၊ မေးရိုးတင်းတင်းနှင့် စူးရှသော မျက်လုံးပိုင်ရှင် ကိုအုန်းခင်သည် မိဘများ ပြောပြီးဆိုပြီး စေ့စပ်ထားသော သတို့သမီးလောင်းကိုပစ်၍ မိဘများကို ဆန့်ကျင်၍ပင် ချိုနွယ်ကို ကိုအရယူခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ထဲကပင် ကိုအုန်းခင်၏ ဇွဲကြီးသော၊ လုပ်ချင်လျှင် မည်သူ့စကားမျှ နားမထောင် ခံယူချက်ပြင်းထန်သော စိတ်ဓာတ်ကို နားလည်သိရှိခဲ့သင့်သည်။ ထိုသို့ဖြင့် အထက်တန်းပြ ဆရာမ လုပ်သက်နှစ်နှစ်မျှ မပြည့်မီပင် ဆရာမဒေါ်ချိုနွယ်ကို၏ ၀ိသေသနောက်တွင် တိုင်းဦးစီးမှူးကတော်ဟူသည့် ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ ဖမ်းသည်ဟူသော ဝေါဟာရများ၊ “လုံးဝ ချွေးမအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုပါ”ဟူသော စကားလုံး ထိုးစစ်များကြားမှပင် ချိုနွယ်ကို တစ်ယောက် ရုံးမှရသော မာစတာဂျစ် ကားကလေးနှင့် ကျောင်းသို့ ကြော့ကြော့လေးလာနိုင်၏။ ဈေးသွားလျှင် ခြင်းကိုင်ရန် ကိုအုန်းခင် တပည့်တစ်ယောက်က အသင့်၊ အိမ်တွင် အိမ်ဖော်မလို။ အောက်ဆိုဒ်ရသော ဌာနဖြစ်၍ “ဆရာ ၊ ဆရာ” ချင်းထပ်အောင် ဘုတ်တက်ဘုတ်ဆင်း ကူညီချင်သောသူများလှသည်။
သားသမီး ငါးယောက်တွင် အကြီးဆုံးသမီးဖြစ်သော ချိုနွယ်ကိုသည် အညာမှ မိဘများထံသို့လည်း အတော်အတန်ကဲ့၍ ဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ ကိုအုန်းခင်ဘက်က ဆွေပြတ်မျိုးပြတ် ဖြစ်နေသည်ကပင် သွားစရာထောက်စရာမလို ပိုကောင်းနေတော့၏။ သားကြီးရဲခန့်၊ သားလတ်မင်းခန့်၊ သားငယ်မိုးခန့်တို့သည် ချိုနွယ်ကို၏ ပွားစီးလာသော ရတနာလေးများဖြစ်သည်။ ကျောင်းမှ ဆရာမများကြားတွင် တိုင်းဦးစီးမှူးကတော် ဒေါ်ချိုနွယ်ကိုသည် သားရှင်ဟူသော ဂုဏ်ပုဒ်နှင့် မာန်တက်ခဲ့သေး၏။ ထိုသို့ အစစအဆင်ပြေချောမွေ့နေသော ဘ၀တစ်ခုသည် တည်မြဲလိမ့်မည်ဟု မှတ်ထင်ခဲ့သည်။ အနည်းဆုံး ကိုအုန်းခင် ပင်စင်ယူသည့်နှစ်အထိပေါ့။ တပည့်တပန်းများ၊ ခြွေရံသင်းပင်းများ၊ လာဘ်လာဘများနှင့် သာယာနေသော ချိုနွယ်ကိုသည် သားသုံးယောက်ကိစ္စ၊ မိဘများကို ငွေခိုး၍ ပို့သောကိစ္စများမှလွဲ၍ အနာဂတ်အတွက် ဖယ်၍ ငွေစုဆောင်းရန် မေ့လျှော့ခဲ့သည်မှာ အမှန်ပင်။
၈၈အရေးအခင်းသည် ကိုအုန်းခင်၏ အိပ်မောကျနေသော နိုင်ငံရေးအသိကို လှုပ်နှိုးလိုက်သည်။ ပုလဲနှင့် ငါးဌာနတွင် ကိုအုန်းခင်ဦးဆောင်၍ စည်းကမ်းသေ၀ပ်စွာ စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒထုတ်ဖော်သည့် အချိန်တွင် ချိုနွယ်ကိုလည်း မလျှော့သော တာဝန်သိစိတ်ဖြင့် ဆရာမများအသင်း ချီတက်ရာ လိုက်ပါခဲ့သည်။ လမ်းဘေးရေအိုးစင်များတွင် အဆိပ်ခပ်သည်၊ ထောင်ဖောက်ပေးလိုက်၍ နှစ်ကြီးရာဇ၀တ်သားများက ဆန္ဒပြသူများကို ၀င်ရိုက်သည် စသည့်သတင်းများ၊ အန္တရာယ်များကြားမှပင် သားသုံးယောက်ကို အထိန်းလက်အပ်ကာ ကိုယ့်ထမင်းချိုင့်ကိုယ်သယ် ကိုယ့်ရေဗူးကိုယ်ဆွဲ၍ ပုသိမ်တစ်မြို့လုံး ပြဲပြဲစင်အောင် ခြေလျှင်လျှောက်၍ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံး ဆိုင်ရာဌာနတို့မှ ဒို့အရေး အော်ခဲ့ကြသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးမည်ဟု ကြားသောအခါ ကိုအုန်းခင်က “တွေ့လား လူထုအင်အားကြောင့် အောင်မြင်ရပြီ”ဟု ၀မ်းသာအားရပြောခဲ့သည်။ ထိုမှတဆင့် NLD ပါတီသို့ ကိုအုန်းခင် ၀င်ခဲ့သည်ကိုလည်း ချိုနွယ်ကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံခဲ့သည်။ မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲများတွင် ကိုအုန်းခင် တရားဟောသည်ကို သွားကြည့်ရင်း အောင်မြင်သောအသံ၊ ခိုင်မာသောယုံကြည်ချက်တို့ဖြင့် ကိုအုန်းခင်ကို “ဒါ ငါ့ယောက်ျားပဲ”ဟု ဂုဏ်ယူစိတ်ဖြင့် မျက်ရည်ပင် ၀ဲ၍ ပီတိဖြစ်ခဲ့ရ၏။ သည့်နောက်တွင် အားလုံးသိကြသည်များ ဖြစ်ပျက်သည်မို့ မပြောလိုတော့ပါ။ အားလုံးမသိသည့် အကြောင်းများသာ ပြောပြလိုသည်။
ပုလဲနှင့်ငါးဌာနတစ်ခုလုံးကို မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ ပုလဲနှင့်ငါးဌာနမှ ၀န်ထမ်းများကို ရေလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန လက်အောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးလိုက်သည်။ ထိုသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးရာအထဲတွင် အရေးအခင်း၌ အထင်ကရပါခဲ့သူများမပါချေ။ ထိုသူများမှာ Force to resign စာရင်းနှင့် အတူ နေ့တွင်းချင်း အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ကြ၏။ ထိုအထဲတွင် ကိုအုန်းခင် ထိပ်ဆုံးကပါသည်ကို အထူးပြောရန်မလိုပါ။ ထို့နောက်တွင်တော့ ညသန်းခေါင်ကျော် တံခါးခေါက်သံများကို ရှောင်ရသော ကာလတစ်ခုကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရ၏။
ကိုအုန်းခင် ရှောင်နေတိမ်းနေသော ကာလတွင် ချိုနွယ်ကိုတစ်ယောက် ကလေးသုံးယောက်နှင့် ဒေါင်ချာစိုင်းနေသည်။ ဆရာမအလုပ်တဖက်၊ ကလေးများ တာဝန်တဖက်နှင့် ယခင်လုပ်လေ့လုပ်ထအသားမကျ၍ အမြင့်မှ ပြုတ်ကျသူလို အကျနာလှ၏။ ခြွေရံသင်းပင်းအားလုံးသည် ရာထူးဂုဏ်ရှိန်နှင့် အတူ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်၏။ အဆိုးဆုံးမှာ ဌာနကပေးထားသော အိမ်နှင့်ကားကို ပြန်အပ်ရခြင်းပင်။
ထိုအချိန်မှ ချိုနွယ်ကိုတို့တွင် ကိုယ်ပိုင် အိမ်တစ်လုံးပင် မရှိသည့်ဘ၀ကို နောင်တရတော့သည်။ သို့သော် နောက်ကျခဲ့လေပြီ။ ပုသိမ်မြို့တွင် ဈေးချို၍ အိမ်ငှားရန် ရှာရလွယ်သည်မှာ ချိုနွယ်ကိုတို့အတွက် မပါ။ NLD မှ ကိုအုန်းခင် မိန်းမဆိုသည်နှင့် ကြောက်ရွံ့နောက်တွန့်သွားစမြဲ၊ “အားတော့နာပါတယ် ဆရာမရယ်၊ ကျွန်မတို့က ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက် မလုပ်ရဲဘူး” ဟူသော စကားများကို သာ ထပ်တလဲလဲ ကြားခဲ့ရသည်။
ငှားရဲ၍ ငှားကြသော လူများကြတော့လည်း တစ်နေပင် မစောင်းပါ။ အားနာခြင်း ရောစွတ်သော ခပ်ဖွဖွတံခါးခေါက်သံများအဆုံးတွင် ရပ်ကွက်လူကြီးနှင့်အတူ ရောက်လာသော အိမ်ရှင်။ ချက်ချင်းပြောင်းပေးပါ။ အထက်က ဖိအားပေးလို့ပါတဲ့။ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုသို့ ၀င်ရုံဖြင့် အိမ်ပင် ငှားနေစရာမရှိသော အခြေအနေမျိုး တခြား မည်သည့်တိုင်းပြည်တွင် ရှိသေးသနည်း ချိုနွယ်ကို မသိပါ။
ကလေးများကို မိတ်ဆွေများအိမ် တလှည့်စီထားရင်း တက်စရာ အိမ်မရှိ၍ လမ်းပေါ်မှာပင် ပစ္စည်းများနှင့် တစ်ည ငုတ်တုပ်ထိုင်ခဲ့ရ၏။ ဆင်းရဲခြင်းက အိမ်ရှေ့မှ တံခါးခေါက်သည့်အခါ အချစ်က အိမ်နောက်ဖေးက ဆင်းပြေးသွား၏ ဟူသော စကားကို မည်သူထွင်သည် မသိ။ အဆင်မပြေခြင်းများက အိမ်ရှေ့မှ တံခါးခေါက်သည့်အခါ ချိုနွယ်ကို၏ နိုင်ငံရေးစိတ်ဓါတ်များက အိမ်နောက်ဖေးမှ ခုန်ထွက်သွားကြ၏။ အပြိုင်းအရိုင်းအရွယ်ရောက်လာသော သားများက ကျောင်းတွင် ဗျူဟာမှူးသားများ၊ တပ်ရင်းမှူး၊ ညွန်ချုပ်၊ ဗိုလ်ကြီး ဗိုလ်မှူးသားများကြားတွင် မျက်နှာငယ်ကြရ၏။ မကြာခဏ ချိန်းပွဲ၊ ထိုးပွဲများ လုပ်ကြလွန်း၍ ချိုနွယ်ကိုမှာ ပြေးရတားရနှင့် တခါမှ သောက မအေးရပါ။
ယခုအိမ်ပိုင်ရှင်မှာ မလေးရှားတွင် လင်ရောမယားပါ အလုပ်သွားလုပ်နေကြသည်။ သူတို့အပ်ခဲ့သော လူမှတဆင့် အိမ်ငှားရန် စကားဆိုသောအခါ “NLD ကဆိုရင် ကျွန်မတို့ ပြန်မလာမချင်းနေပါ။ ဘယ်သူ ဖိအားပေးပေး ကျွန်မတို့က ဂရုမစိုက်ဘူး”ဟု အဖြေရခဲ့သည်။ သြော် ဒီလိုလူတွေလည်း ရှိသေးသကိုးဟု ၀မ်းသာခဲ့ရသည်။ သားသုံးယောက်လုံးသည် သူတို့အဖေခြေရာကို မနင်းကြပါ။ ထိုကိစ္စကို ကိုအုန်းခင်က ဘ၀င်မကျ၍ တွေ့တိုင်းဆုံတိုင်း နိုင်ငံရေး တရားဟောသော်လည်း ချိုနွယ်ကိုကတော့ ကြိတ်၍ ၀မ်းသာနေခဲ့ပါသည်။ ဘယ်အမေမဆို ကိုယ့်သားသမီးများကို ထောင်ကျတန်းကျတော့ မဖြစ်စေချင်ဘူးမဟုတ်လား။
သားအကြီး စင်္ကာပူထွက်တော့ ချိုနွယ်ကို အတော်ကြပ်သွားသည်။ သူလည်း မိသားစုအတွက် အဆင်ပြေပါစေတော့ဟု ရထားတဲ့ GTI လက်မှတ်လေးအရင်းပြုပြီး Work Permit လာရှာတဲ့ ပွဲစားနှင့် ဆက်မိသွားခြင်းပင်။ ပွဲစားခအတွက်တော့ ချိုနွယ်ကို့ မိဘလက်ထက်က ရွှေစလေးတွေ ချိုနွယ်ကို့ကို ပစ်ပြေးကြပေါ့။ သားအငယ်ဆုံးက ဆိုင်ကယ်(နံပါတ်မဲ့) ၁စီးလောက် ၀ယ်ပေးပါ ဆိုတာပင် မသိဟန်ဆောင်နေရသည်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ နေဖို့စားဖို့ပင် နဂိုအခံလေးများနှင့် မနည်းရပ်တည်နေရသည်။ ဘာပဲပြောပြော အလုပ်ပေါင်းများစွာ၏ ငြင်းပယ်ခံအပြီးတွင် ကိုအုန်းခင် အလုပ်ရသည်။
ပုသိမ်မြို့ထဲနှင့် အပင်နှစ်ဆယ် GTC ကို ဆွဲရသော ကားဒရိုင်ဘာ၊ ဒါလည်း လူသိချင်းက ကူလိုက်၍ပင်။ လမ်းရိုးအတိုင်း လိုက်၍က ရလမ်းမမြင်။ တိုင်းဦးစီးမှူးတယောက် အသက်၅၀ကျော်မှ သာမာန်လိုင်းကားမောင်းနေရသည်ဟု ဂျီးမထူအား။ ရသည်ကိုပင် ကျေးဇူးတင်နေရသည်။ NLDမှ ထွက်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ဖိအားများကို ခေါင်းမာမာနှင့် ငြင်းဆန်ဆဲ။ ချိုနွယ်ကိုကတော့ မိန်းမသားမဟုတ်လား။ ကိုယ့်မိသားစုအကျိုး ကိုယ်အရင်ကြည့်တာတော့ အပြစ်ဟု မမြင်စေချင်။ ဒီအတွက် ရန်ပွဲပေါင်းများစွာ တခြိမ်းခြိမ်း။
ဒီအထဲ အလတ်ကောင်က မိန်းမခိုးပြေးသွား၏။ မိန်းကလေးမိဘများက ချိုနွယ်ကို့အသိ ဆရာမများထဲကပင်။ သဘောမတူပါဟူသော အသံထွက်လာသောအခါ ချိုနွယ်ကို ထူးပြီး မအံ့သြမိပါ။ အငယ်ကလည်း မလိမ္မာ၊ အိမ်တွင် အဆင်မပြေကြောင်းသိသော်လည်း ဂရုမစိုက်၊ လိုချင်သည်များကိုသာ တောင်းဆိုတတ်၏။ ဤသည်မှာပင် သူ့အဖေနှင့် တူနေသည်လား။ ခေါင်းမာသည်၊ ဇွဲကြီးသည်ဟုပင် ချီးကျူးရလေမလား။ အတူတွဲ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရာမှ အရောင်ပြောင်းသွားသူ တချို့ကို တွေ့သောအခါ ကိုအုန်းခင်ကို လက်ကုပ်မိသည်။ “နောင် ဘယ်တော့မှ မတိုက်တွန်းနဲ့” ဟူသော စကားသံမာမာကိုသာ ရခဲ့သည်။ ချိုနွယ်ကိုကများ သစ္စာဖောက်ဖို့ တိုက်တွန်းမိသလား။ အင်း . ဒါပေမယ့်လေ သစ္စာဖောက်တွေပဲ ခေတ်အဆက်ဆက် ကြီးပွားနေကြတာ မဟုတ်လား။
သားကြီးနှင့် ဖုန်းချိန်းထား၍ ညနေစာစောစောစားကာ ဖုန်းဆိုင်သို့ သွားစောင့်နေခဲ့သည်။ အမြဲတမ်းချိုနွယ်ကို တစ်ယောက်တည်းပေမယ့် ဒီနေ့တော့ သား၏ တောင်းဆိုချက်အရ ကိုအုန်းခင်ကိုပါ ခေါ်လာခဲ့သည်။ ဖုန်းဝင်လာသည့်အခါ “မေမေ”ဆိုသည့် သား၏ ခေါ်သံက ခပ်ပျော့ပျော့။ “သားနေမကောင်းလို့လား၊ အလုပ်ပန်ပန်းလို့လား” ဟူသော ချိုနွယ်ကို၏အမေးကို သားက မဖြေပဲ “အဲသည်မှာ အခြေအနေဘယ်လိုနေလဲ အမေ၊ အဖေ့နောက်ကိုရော နဂိုလို လိုက်နေကြသေးလား” ဟုမေး၏။ ထုံးစံအတိုင်းပင် ဖြစ်သော်လည်း သားကို စိတ်ပူမည်စိုး၍ “ဘာမှ မဖြစ်ဘူးသား အားလုံးကောင်းတယ်”ဟု ပြန်ဖြေလိုက်သည်။ “ဒီမှာတော့ ဆန္ဒတွေ ပြနေကြတယ် အမေ။ စစ်တဲ့လူရော၊ မစစ်တဲ့လူရောပဲ။ နဂိုက ဘာမှမလုပ်ပဲ ခုမှ ဓာတ်ပုံမပါပါအောင် ရှေ့တန်းက ၀င်ဆန္ဒပြပြီး ဒုက္ခသည်ခံဖို့ အချက်အလက်တွေ လိုက်စုဆောင်းနေသူတွေတောင် ရှိတယ်။ US ကို ကူးကြဖို့လေ” သားအသံက စိတ်ပျက်သံတွေ တလုံးတခဲပေမယ့် ချိုနွယ်ကို သတိမထားမိ၊ အားတက်သရောနှင့် “သားလဲ အဲလိုလုပ်လို့မရဘူးလား၊ သားအဖေနာမည်လည်း သုံးလေ”ဟု ပြောလိုက်မိသည်။ ကိုအုန်းခင်၏ အကြည့်စူးစူးကို မသိဟန်ဆောင်နေစဉ်ပင် သားက “သားကို မတိုက်တွန်းပါနဲ့ မေမေ၊ ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ အဲလိုလုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး”ဟု တုန့်ပြန်၏။
ဖုန်းခွက် နားကပ်နားထောင်နေသော ကိုအုန်းခင်က “ဒါမှ ငါ့သား” ဟု အော်လိုက်ချိန်တွင် ချိုနွယ်ကိုကတော့ နောက်မြီးပြတ်နေသော ကိုအုန်းခင်၏ ရာဘာဖိနပ်ကိုသာ ငေးကြည့်နေမိတော့သတည်း။
ခရေဖြူ	Users' Comments Average user rating
Display5of5comments	1. 01-11-2009 23:29
Ma Ma u r letter is full feeling..i m very fell. so next time really about can write i every time read this letter but feeling is no change.........	Guest
cho nyi nyi	2. 16-10-2009 19:21
kha yae phyu
GOOD .VERY GOOD ! NOUT LAE WRITE TAR NAW. MG LAY READ PAY MAL..... MA MA MYANGALE....	Guest
s.spy	3. 16-10-2009 19:16
VERY GOOD! THAT IS TRUE INTERESTING.YOU FRI	Guest
်flowergirlaugust	4. 18-09-2009 15:25
Ma Ma Khayayphyu... Dar ko khu mha phat mi lo par.... P twer mhan tg ma thi lite bu (ae lout ah hti swe` yu twer dae)... Nice one Ma Ma Guest
Orange Chit Thu	5. 10-08-2009 19:37
I like that....really good..	Guest
myintaung	Display5of5comments
Add your commentmXcomment 1.0.8 © 2007-2013 - visualclinic.frLicense Creative Commons - Some rights reserved	ပါရမီဖြည့်ဖက် တစ်ယောက်၏ မှတ်တမ်း	Currently 3.62/5 12345 Rating 3.6/5 (26 votes) < Prev